Kuki nwere chocolate gbara ọchịchịrị, na -atọ ụtọ! | Bezzia
Maria onyekwere | 14/09/2021 10:00 | Postres
Mgbụsị akwụkwọ dị oke ezigbo oge ime kuki. Na Bezzia, anyị adịghị umengwụ ịgbanye oven, mana anyị ghọtara na ebe ndị ahụ ọkụ na -adị, ọ ga -esiri gị ike karị. Yabụ ọ bụrụ na ị kabeghị ya, chekwaa uzommebe a maka kuki gbara ọchịchịrị maka oge ọzọ.
Na Bezzia anyị enweghị ike iguzogide. Anyị gbabara azụmaahịa ozugbo enyi anyị gbachara mbọ kuki ndị a, gwa anyị usoro nri ya. Ha bụ kuki dị mfeỌzọkwa, ha anaghị atụ egwu. Ee, ị ga -achọ ezigbo nri iji mee ha.
Kedu ka ị ga -esi nweta oge iji lelee kuki ndị a nwere nnukwu shuga, yabụ na ọ dịghị mma iri ha kwa ụbọchị. Mana ọ dị egwu inye anyị ọmarịcha ụtọ, dị ụtọ nke ukwuu! Ha nwere ọmarịcha ọmarịcha na ọmarịcha dị n'ime. Kedu ihe ọzọ anyị nwere ike ịrịọ? Ị na-ahọrọ kuki na-enweghị shuga? Ule ị bụ almọnd.
1 Efrata (maka nkeji 20)
Efrata (maka nkeji 20)
180 g. nke bọta
170 g. agba aja aja
50 g. ọcha shuga
1 akwa + 1 nkochi ime akwa
130 g. ntụ ọka
65 g. ntụ ọka wit
½ na yist
½ teaspoon nke nnu
140 g. ọchịchịrị chocolate
Gbazee butter na a saucepan n'elu ọkara okpomọkụ na tost. Na -esote, wụsa bọta n'ime nnukwu efere ka ọ jụọ oyi.
Mgbe bọta dị n'ime ụlọ okpomọkụ, tinye shuga ma jikọta ya na mkpanaka ole na ole aka ma ọ bụ ọkụ eletrik.
Mgbe ah tinye akwa, nkochi ime akwa na isi ihe vanilla wee tie ọzọ ka inweta oke uka.
Emechaa tinye ike ntụ ọka, ntụ ọka wit, yist, bicarbonate, nnu na tuo nke nutmeg wee jikọta ya na mmechi mkpuchi ruo mgbe agwakọtara ha nke ọma na mgwakota agwa.
N'ikpeazụ, iri chocolate n'ime iberibe were mma tinye ya.
Jiri ngaji abụọ jide ukpa nke nwere ukpa na ị ga -ahapụ na efere ma ọ bụ tray nke e ji akwụkwọ tee mmanụ kpuchie ya. Mgbe ahụ, tinye efere ma ọ bụ tray n'ime friji maka nkeji 30 ka mgwakota agwa ahụ sie ike.
Ugbu a, Kpochapu oven ruo 180 Celsius ma jiri akwụkwọ akpụkpọ anụ kechie tray achịcha.
Debe bọọlụ nke mgwakota agwa na ya, ya na mkpịsị aka abụọ dị iche n'etiti otu na nke ọzọ nke mere na mgbe ha na -agbasa n'ike ọkụ ha anaghị arapara.
Were tray ahụ na oven na esi nri na 180ºC maka nkeji iri na abụọ ma ọ bụ ruo mgbe akụkụ ya bụ ọla edo.
N'ikpeazụ, wepụ ha na oven na hapụ ha ka ha zuo ike maka minit 10-15 tupu ị na -ebufe ha n'ime akwa iji gwụchaa jụrụ oyi.
Nwee kuki chocolate gbara ọchịchịrị, naanị ma ọ bụ jiri kọfị, mmiri ara ehi ma ọ bụ ihe ọ vegetableụ drinkụ akwụkwọ nri.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ntụziaka » Postres » Kuki nwere chocolate gbara ọchịchịrị, na -atọ ụtọ!